Manimba Endrika ny Tantara Ny Sarimihetsika Mankahala Japoney Ataon’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Manimba Endrika ny Tantara Ny Sarimihetsika Mankahala Japoney Ataon'i Shina
Voadika ny 19 Avrily 2013 0:28 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Català, Español, English
Narahin'ny mpiserasera maso indray tao ho ao ny famokarana sarimihetsika mankahala Japoney fandefa amin'ny fahitalavitra. Nahatratra ny hoza-dohan'ny mpampita vaovao eo ambany fanaraha-mason'ny fanjakana ihany ny sarin-jazavavy roa niboridana miarahaba andia-miaramila shinoa vitsivitsy tafavoaka tsinahy.
Nihanafana ny ady nosy miorina eo atsinanan'i Shina teo amin'i Shina sy Japana nandritra ny telo taona izao, Nihabetska nifanaraka tamin'izany ihany koa ny isan'ny sarimihetsika fandefa fahitalavitra [zh] momba ny ady voalohany sy faharoa nifanaovan'i Shina sy Japana, izay niteraka fahafatesan'ny Shinoa an-tapitrisany. Faly aok'izany ny Andrim-panjakana misahana ny Radio, Sarimihetsika ary Fahitalavitra nankatò ireny karazan-tantaram-pitiavan-tanindrazana ireny.
Saingy heverina ho tafahoatra kosa, eny fa na dia ho an'ireo seha-pamoaham-baovao tantanin'ny fanjakana, ka anisan'izany ny CCTV sy ny Gazetim-Bahoaka, tamin'ny fitsikerana [zh] fa lasa fanao zinona loatra ny sarimihetsika fandefa amin'ny fahitalavitra mifandraika amin'ny fankahalana Japoney, tamin'ny fahitana sary roa ahitana olona miboridana izay nipongatra avy ao amin'ny sehatra famahanam-bolongana bitika Shinoa Sina Weibo.
Mpisera Sina Weibo iray namoaka sary roa nalaina avy tamin'ny sarimihetsiky ny ady nifanaovan'i Shina sy Japana ahitana zazavavy iray mitsoraka salut andia-miaramila Shinoa iray.
Ireto sary ireto, izay nivezivezy tokoa tato amin'ny aterineto, dia nalaina tao amin'ny famoaham-baovaom-paritra iray nivoaka tamin'ny 9 Avril 2011 [zh] sy tamin'ny gazety nasionaly [zh] tokony ho roa andro taty aoriana.
Heniky ny tantaram-pankahalana Japoney ny onjam-peo Shinoa tamin'izany fotoana izany. Araka ny tatitra nataon'ny famoaham-baovaom-paritra iray, 70 amin'ireo sarimihetsika 200 mpandeha amin'ny fotoana be mpanaraka amin'ireo fampahalalam-baovao lehibe tamin'ny taona 2012 no niresaka adin'i Shina sy Japana. Loharanom-baovao avy amin'ny Sarimihetsika Hengdian sy Tanànan'ny Televiziona [vondrona mpamokatra tantara tsangana sy sarimihetsika iray] ao amin'ny faritany Zhejiang no nilaza [zh] fa amin'ireo mpiantsehatra 300.000 noraisina hilalao, 60 isan-jaton'izy ireo no maka ny toeran'ny miaramila Japoney.
Isan-taona dia tokotokony ho 48 eo ny tantara vokarina miresaka ny fanoherana ny fananiham-bohitry ny Japoney. Maty im-balo isan'andro ny mpiantsehatra iray milalao ny toeran'ny miaramila Japoney iray. Amin'ny ankapobeny dia maharitra efa-bolana eo ho eo ny famitana ny tantara iray, izany hoe mihoatra ny iray miliara ny isan'ny miaramila Japoney ‘maty’ ao Hengdian fotsiny.
Ho setrin'ireo sary tafavoaka tsinahy ireo, nandrafitra rakitsarin'ireo pikantsarin'ireo fotoana mba tsy izy kosa mandritra ny tantaran'ady ny Lohatenim-baovaon'ny Sina Weibo. Ireo andian-tsary ireo dia voampita mihoatra ny in-30.000 tao anatin'ny 24 ora monja ary nahazoana fanehoan-kevitra an'arivony.
Ireto ambany ireto ny angona voadikanteny:
Andia-miaramila Japoney mandositra vehivavy iray mitondra tsipìka mikendry azy ireo.
Malemy loatra ny fitaovam-piadiana rehetra — avelao hopotehiko ny miaramila Japoney. Matanjaka loatra ny tanany ka mora mahatapaka ho roa ny miaramila Japoney.
Lasa nivadika ho mpitsikilo mitam-piadiana mitondra fiara tsy mataho-dalana ny miaramilantsika. Ahoana moa ny mahatonga izany ao amin'ny ady Sino-Japoney?
Jereo ity zazavavy ity. Na dia nohodidinina miaramila Japony mitam-piadiana aza izy, dia nahafaty ireo andia-miaramila Japoney mitam-basy rehetra ireo tamin'ny alalan'ny Tai Chi Chuan, dona mahafaty sy fisidisidinana.
Mifangaro amin'ny tantaram-pitiavana ity tantaram-panoherana ny fananiham-bohitra Japoney ity , tena miady amin'ny Japoney tokoa ve ianareo?
Ity no iray amin'ny tena katraka indrindra. “Maherifo” mpanohitra ny Japoney iray nitoraka grenady nankany an-danitra dia nampianjera voromby mpiady Japoney iray!!! Fitaka re izany!
Mitsambikina amin'ny hantsana hisamborana miaramila Japoney izay mitondra fiara manodidina eo sy mamono azy ireo… Mety ho manambitana tsy misy toy izany ianao raha tsy maty, mbola afa-manantena anao hamono ny miaramila Japooney ve ny tsirairay?
Nahare aho fa antsoina hoe AK47 io basy io… [basy tsy amin'ny androny sy tsy nampiasain'ny Japoney?]
Manaratsy ny sarimihetsika ny mpiserasera ao amin'ny Weib, miampanga azy ireny ho manova ny tena tantaran'ny fananiham-bohitra. Ho setrin'ny fisian'ilay zazavavy miboridana ihany, nanoratra [zh] i “Bozaka an-Tanàna 2013″ (＠城草 2013):
Tohina tokoa nahare fa misy ny vehivavy maherifo mitsoraka salut andia-miaramila Shinoa ao amin'ny tantara tsangan'ny fanoherana ny fananiham-bohitry ny Japoney. Ho takalony ho an'ireo mpijery maro, tsy misy fototra narahina (ny tantara)?! Nahitana hevitra hafahafa maro dia maro tokoa ny tantara tsangan'ny fanoherana ny fananiham-bohitry ny Japoney, ny sasany aza moa manodina ny mpivaro-tena ho maherifo amin'ny fanoherana ny Japoney. Rehefa eny an-tany fiadiana ireo mpiantsehatra vehivavy ireo, dia mikarakara tena mba hanintona lehilahy. Nanova ny tantara izany. Avelantsika ho hitan'ny ankizy ve izany?
Ny mpisera “Hazobe an'Ala” (＠林林林林大木) nahita [zh] ny fomban'ny tantara ho an'olondehibe ho mampitokelaka:
Ny fahitana ny fivelaran'ny tantara tsangan'ny fanoherana fananiham-bohitra Japoney mankany amin'ny TV ho an'olondehibe no manaporofo ny fiovan'endriky ny fivoaran'ny fifampihaonantsika, mihamivoatra manaraka ny taona izany. Mitehaka mandritra ny andro aho…
Tezitra amin'ny fampizotra ny tantara [zh] ny mpanoratra (mpanatontosa) Bei Cun (@北村):
Afa-mamokatra zavatra matotra kokoa ve ry zareo? Tantara manana ny fiavahany ny ady Sino-Japoney ary ratram-po ho an'ny vahoaka Shinoa. Tsy vitan'ny mahaloto ny fahitalavitra, fa fanimbazimbana ny maherifontsika ihany koa amin'ny fandevenana ny rany sy ny ranomasony.
Ny mpisera “Jereo ny Vokovoko Mena – 365″ (@看听-红十-365) manontany tena [zh] amin'ny tompon'andraikitra amin'ny toe-draharaha:
Feno tantara tsagan'ny fanoherana ny fananiham-bohitra Japoney izay manova ny tantara ny fahitalavitra. Mivarotra fitiavan-tanindrazana sandoka ry zareo hahazoana tombombarotra. Maharikoriko…. Saingy raha mbola mieritreritra indray ianao, iza no diso famindra…
Maro ireo Shinoa mahatakatra fa nandrisika ny famokarana sarimihetsika mankahala Japoney ny manampahefana. Izany no mahatonga ny mpisera “ThreeWatches” milaza ny tsikera ataon'ny CCTV sy ny Gazetim-Bahoaka samy tantanin'ny fanjakana ho fihatsaram-belatsihy [zh]:
Marina fa nanary ny fototry ny tantara ny tantara tsangan'ny fanoherana ny fananiham-bohitra Japoney saingy rehefa ny CCTV sy ny Gazetim-Bahoaka no mitsikera ireny ho “tsy misy dikany sy manamaizin-tsaina”, dia tahaka ny hafahafa sahala ny mpanolana miantso ny hafa ho mpanorisory vehivavy.
Nitsiky vendrana amin'ny fomba fitenim-pitiavan-taninadrazana i “Rano Rita” (@水水Rita-天然呆) ary niteny hoe [zh]:
Miahiahy aho fa avy any amin'ny fahavalom-pirenena ireo tale ary fanahy inian-dry zareo ny mamorona tantara tsangana amin'ny fanoherana ny fananiham-bohitra Japoney ho mahasorena tahaka izao.